Teleski | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
အီတလီနိုင်ငံတွင်လေယာဉ်ပျံတစ်စီးသည်နှင်းလျှောစီးသော Cable ကားပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်
İtalya Alpleri’nde çift kişilik bir uçak, kayakçıları taşımak için kullanılan teleferiğin tellerine takılarak havada asılı kaldı. Uçaktan fırlayarak kanadın üzerine düşen 62 yaşındaki pilot, hafif yaralı olarak kurtuldu. Uçakta yolcu [ပို ... ]
21 / 11 / 2017 Levent Ozen နှင်းလျှောစီးရာသီများအတွက် Yedikuyu ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ် yorumlar kapalı
Kahramanmaraşမြို့တော်စည်ပင်သာယာ၏ရူပါရုံကိုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်သော Yedikuyular နှင်းလျှောစီးစင်တာ, အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာဆက်လက်။ မြို့ပြမြူနီစီပယ်၏မြေတိုင်းနှင့်စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန၊ မြေတိုင်း ဦး စီးဌာနနှင့်စီမံကိန်းဌာန၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများတွင် [ပို ... ]
20 / 09 / 2017 Levent Ozen Yedikuyu နှင်းလျှောရာသီပြင်ဆင် yorumlar kapalı
Yedikuyular Kayak Merkezi Sezona Hazırlanıyor : Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi inşaatında telesiyej, teleski gibi halatlı mekanik sistemlerin direklerinin dikilme işleminin tamamlanmasının ardından pist düzenleme ve halatlı sistemlerin çalışması [ပို ... ]
Yedikuyu ကုလားထိုင်-LIFT နှင့်၌စိုက်သောနှင်းလျှောထမ်းဘိုးတို့ကိုအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ
06 / 09 / 2017 Levent Ozen နှင်းလျှောစီးထမ်းဘိုးအတွက် Yedikuyu သည့်နှင်းလျှောစီး LIFT နှင့် chairlift များအတွက်စိုက်ထူခဲ့သည် yorumlar kapalı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi inşaatında telesiyej, teleski gibi halatlı mekanik sistemlerin direklerinin dikilme işlemi devam ediyor. Direklerin dikilmesinin ardından kablo çekimleri yapılacak. Bugün elektrik olmayan dağlara 5.3 km [ပို ... ]
တိုးတက်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် Yedikuyu နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာ
19 / 07 / 2017 Levent Ozen နှင်းလျှောစီး pistes Yedikuyu များအတွက်တိုးတက်မှု၌ရှိကြ၏ yorumlar kapalı
Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Pistler Yapılıyor : Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un önemli projelerinden birisi [ပို ... ]
22 / 05 / 2017 Levent Ozen ခုနစျပါးရေတွင်းများကိုပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးဘို့တူးခဲ့သည် yorumlar kapalı
Yedi Kuyulara İlk Kazma Vuruldu :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedi kuyular mevkiinde yapılacak olan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi yapımı için ilk kazmayı vurdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet [ပို ... ]
Cableway စနစ်များဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက် | drag မဖြစ်မနေစနစ်များ
16 / 04 / 2014 Levent Ozen Cableway စနစ်များဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက် | entrained စနစ်များများအတွက် yorumlar kapalı
Teleferik Sistemleri Tasarım Kriterleri | Sürüklemeli Sistemler :Bu bölüm, yolcuların dönmekte olan bir fiber çekme halatına, dönmekte olan bir halata veya fiber halata bağlı sürükleme donanımına tutunarak veya kayak eğitim [ပို ... ]
Cableway စနစ်များဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက် | အဆိုပါမျက်နှာပြင် propellant စနစ်များ
16 / 04 / 2014 Levent Ozen Cableway စနစ်များဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက် | လိမ်း propellant စနစ်များများအတွက် yorumlar kapalı
Teleferik Sistemleri Tasarım Kriterleri | Yüzeyden Taşımalı Sistemler :Bu bölüm, yolcuların veya kayak eğitimi araçlarının üzerindeki yolcuların; tepede hareket eden ana çelik halatla yürütülen çekici donanımlar vasıtasıyla yüzey üzerinde seyahat [ပို ... ]
လေလံ 16 LIFT နှင့်နှင်းလျှောစီး LIFT ဧပြီလကျင်းပလိမ့်မည်
Sivas’ın kış turizmine katkı sağlaması ve bölgenin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi amacıyla, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama [ပို ... ]
Burdur Salda နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေအတွက် Teleski ပျက်ကွက်
Burdur နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာကြောင့်နည်းပညာပိုင်းပြဿနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်ပျက်ကွက်နှင်းလျှောစီး Teleski လိုင်းအတွက် operating Salta Salta Teleski မှဖွင့်လှစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏ဝန်ဆောင်မှု၏ဖေဖော်ဝါရီလ 18 19-2013 နေ့စွဲများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို။ ရင်းမြစ်: saldakayakmerkezi.net
နှင်းလျှောစီး LIFT နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုနည်းပညာ
İki nokta arasında gerili bir tel üzerinde insan ve yük taşımaya yarayan hava taşıt aracı. Teleferikler, sınaî işletmeler ya da insan taşımacılığında, kara ve demiryolu kurulmasının güç ve masraflı olduğu [ပို ... ]
Kars Çamurlu T-Bar Teleski Hizmete Girdi : Kristal kar ve çam ormanlarının arasında hizmet veren Çamurlu T-Bar Teleski Tesisi, Sarıkamış’ta 2009 kış sezonunda hizmete girerek kayakçılar için alternatif bir kayak merkezi [ပို ... ]